Sina Tombony ny mpanamboatra tile mpiorina sentetika sy mpamatsy | Jiaxing
1. Ny fanoherana ny toetr'andro mahery Ny taila vita amin'ny resin synthetic amin'ny ankapobeny dia miteraka resins injeniera fanoherana toetr'andro avo lenta. Toy ny ASA, PPMA, pmma, sns., Ireo fitaovana ireo dia fitaovana mahazaka toetr'andro avokoa, manana fanoherana toetr'andro miavaka eo amin'ny tontolo voajanahary. Izy io dia afaka mitazona ny fiorenan'ny loko sy ny fananana ara-batana, na dia aorian'ny fahitana maharitra amin'ny taratra ultraviolet, hamandoana, hafanana, hatsiaka ary fiantraikany.
2. fanoherana tsara harafesina
Ny resina fanoherana ny toetr'andro sy ny resina lehibe dia manana fanoherana tsara harafesina, tsy ho tototry ny orana sy ny lanezy hiteraka fahasimbana amin'ny asa, afaka mahatohitra ny fahasimban'ny akora simika maro toy ny asidra, alkaly ary sira mandritra ny fotoana maharitra. dia tena mety amin'ny faritra amoron-tsiraka miaraka amin'ny harafesina famafazana sira ary faritra maloto amin'ny rivotra.
3. Fampisehoana fanoherana ny enta-mavesatra tsara
Ny kapila resin synthetic dia manana fanoherana tsara.
4. Fiatrehana fiatraikany tsara sy fanoherana ny hafanana ambany
Ny taila vita amin'ny resina sentetika dia misy fanoherana tsara amin'ny mari-pana ambany, ny maratra vy 1 kg mavesatra dia milatsaka malalaka amin'ny vatan'ny taila amin'ny haavo 1,5 metatra nefa tsy vaky. Aorian'ny tsingerin'ny hatsiaka 10, ny vokatra dia tsy misy lavaka, mibontsina, mamontsina ary mamaky.
5. manadio tena
Ny velaran'ilay kapila resina sentetika dia matevina sy malama, tsy mora mandray vovoka, ary misy "effes lotus" .Nodiovina madio toy ny vaovao ny orana, ary tsy hisy fisehoan-javatra mifono fanasan'ny orana aorian'ny fametrahana ny loto .
6. mora apetraka
Amin'ny ankapobeny, ity vokatra ity dia manana ireto toetra manaraka ireto:
Faritra misy takelaka lehibe, fahombiazan'ny paving avo
Mavesatra maivana, mora esorina
Vokatra manohana feno
Fitaovana sy fomba fanao tsotra
Ny kapila resin synthetic dia nandalo ny mari-pankasitrahana ny vokatra momba ny tontolo iainana China,
Rehefa tapitra ny ain'ny vokatra dia azo averina alamina sy ampiasaina indray izy io.
8. Nahatratra B1 ny tahan'ny afo
Mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny afo ho an'ny tafo fanafoana tafo ary mahatratra ny fenitra tsy mahazaka afo, mampihemotra ny fielezan'ny afo.